Wararka - BXL Hal-abuur leh ku Guulaystay IF Abaalmarinta Naqshadeynta 2022
BXL Hal-abuurka Guulaystay HADDII Abaalmarinta Nakhshadeynta 2022
Miraha Oolong Shaaha
Baakadaha ayaa si hal abuur leh loo naqshadeeyay iyadoo lagu saleeyay shaaha khudaarta oolong, iyadoo la siinayo shaqsiyaad kala duwan shaaha khudaarta ah sida Cambaha, Canabka, Miro guduudka, iyo dhadhanka blueberry, waxay ka dhigan tahay shakhsiyaadka kala duwan ee dhalinyarada maanta.
Iyagoo adeegsanaaya fanka collage-ga oo kala jajaban qaab muujinta, waxa la rajaynayaa in dhalinyarada casriga ahi ay wakhtiga kala qaybsan ka faa’idaystaan ​​si ay uga nastaan ​​noloshooda mashquulka ah, isla markaana ay la jaanqaadi karaan dhadhanka shaaha ee kala duwan iyadoo loo eegayo niyadda kala duwan si ay khibrad cajiib ah ugu helaan cabitaanka shaaha.
Waxaan had iyo jeer aaminsannahay in naqshadeynta hal-abuurku ay aad muhiim ugu tahay alaabooyinka.
BXL Creative had iyo jeer waxay u hoggaansami doontaa aragtida "ka go'an in ay noqoto Shiinaha No. 1 brand baakadaha hal-abuurka ah iyo brand baakadaha hal-abuurka caalamiga ah si fiican u yaqaan", si joogto ah laftiisa ka sarraysa, ogolaan badeecadaha suuq-geynta si fiican ay sabab u tahay design hal abuur leh, iyo samaynta nolosha wanaagsan ay sabab u tahay. naqshad hal abuur leh.
Waqtiga boostada: Abriil-14-2022
Hore: Sanduuqa Lady M Mooncake